I-Doogee V20: intengo nosuku lokukhishwa | Izindaba zegajethi
U-Ignacio Sala | 13/01/2022 08:56 | AmaSelula
Omunye wabakhiqizi be-smartphone ogxile emsebenzini wakhe kuma-smartphones aqinile e-Doogee, umkhiqizi owethula njalo ngonyaka ububanzi bemishini yazo zonke izabelomali futhi ngaleyo ndlela ihlangabezane nezidingo zenani elikhulu labasebenzisi.
Lo mkhiqizi usanda kumemezela ngokusemthethweni i-terminal entsha. Sikhuluma ngayo I-Doogee V20, itheminali lo mkhiqizi afuna ukuzibeka ngayo njenge ibhentshimakhi emkhakheni wama-smartphone omangelengele, hhayi kuphela ukumelana kwayo kodwa nokusebenza kwayo okuphezulu.
Uma ufuna i-smartphone eqinile futhi umenzi u-Doogee uphakathi kwemikhiqizo ebhekwa njengenketho, sizokukhombisa. yonke imininingwane ye-Doogee V20 entsha.
1 I-Doogee V20 Imininingwane
2 Iprosesa ye-5G
3 Isibonisi se-AMOLED
4 3 amakhamera nganoma yisiphi isimo
5 Imelana nazo zonke izinhlobo zokushaqeka
6 2 ibhethri lezinsuku
7 Imibala, ukutholakala kanye nentengo ye-Doogee V20
I-Doogee V20 Imininingwane
Umseshi Ama-cores angu-8 ane-chip ye-5G
Imemori ye-RAM 8GB LPDDR4x
Isitoreji 266 GB UFS 2.2 – inwebeka ibe ngu-512 GB ngekhadi le-MicroSD
Isikrini esikhulu I-AMOLED engu-6.4 intshi ekhiqizwe i-Samsung – Resolution 2400 x 1080 – Isilinganiso 20:9 – 409 DPI – Contrast 1:80000 – 90 Hz
isikrini sesibili Itholakala ngemuva eduze kwemojuli yezithombe enamayintshi angu-1.05
Amakhamera angemuva Inzwa enkulu engu-64 MP ene-Artificial Intelligence – HDR – Imodi yasebusuku
Inzwa yokubona ebusuku engu-20 MP
I-8MP Ultra Wide angle
Ikhamera yangaphambili 16 ILUNGU LEPHALAMENDE
Isistimu yokusebenza I-Android 11
Izitifiketi IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
Hita 6.000 mAh - Isekela ukushaja okusheshayo okungu-33W - Isekela ukushaja okungenantambo okungu-15W
Okuqukethwe ibhokisi Ishaja engu-33W – ikhebula lokushaja le-USB-C – Incwadi yeziqondiso – Isivikeli sesikrini
Uma ungavamisile ukuvuselela i-smartphone yakho njalo ngonyaka, kufanele uqale ukucabangela ukuthi kungenzeka yini khetha imodeli ye-5G.
Yize kusenesikhathi esincane sokuthi amanethiwekhi e-5G atholakale kulo lonke elaseSpain nakwamanye amazwe, ukuthola i-smartphone efana ne-Doogee V20 5G kuzokuvumela ukuthi ud.Jabulela isivinini se-inthanethi esiphezulu kudivayisi yakho iminyaka ezayo.
I-Doogee V20 iphethwe ngu-a 8 core processor, kanye no-8 GB wenkumbulo ye-RAM yohlobo lwe-LPDDR4X ukuze imidlalo nezinhlelo zokusebenza zisebenze ngesivinini esikhulu ngangokunokwenzeka.
Mayelana nesitoreji, elinye lamaphuzu abaluleke kakhulu namuhla lapho uthenga i-smartphone, nge-Doogee V20 ngeke sisale ngemuva, ngoba ihlanganisa 256 GB yesikhala sohlobo lwe-UFS 2.2. Uma sisilela, ungakwazi ukwandisa isikhala ngekhadi le-microSD sifike ku-512 GB.
Ngaphakathi kwe-Doogee V20, sithola I-Android 11, okuzosivumela ukuthi sifake noma yiluphi uhlelo lokusebenza olutholakala ku-Google Play Isitolo.
Inguqulo ye-Android etholakala ku-Doogee V20, ihlanganisa a isendlalelo esincane sokwenza ngokwezifiso, ngakho-ke ngeke kube nzima ukukwazi ukuzuza okuningi ngaphandle kokuhlupheka ngezinhlelo zokusebenza abakhiqizi abavame ukuzifaka nokuthi, ezimweni eziningi, akekho ozisebenzisayo.
Njengoba intengo yezikrini ezinobuchwepheshe be-OLED isidumile, wonke umuntu angathanda ukukwazi ukujabulela ikhwalithi esinikeza yona. I-Doogee V20 ihlanganisa a Isikrini sohlobo lwe-AMOLED esakhiwe ngabakwaSamsung (umkhiqizi omkhulu wezikrini zamaselula emhlabeni).
Isikrini sifinyelela amayintshi angu-6,43 ngokulungiswa kwamaphikseli angu-2400 × 1080, ukukhanya kwama-nits angu-500 nokuhluka okungu-80000:1, ukuminyana kwephikseli okungu-409 nokumbozwa kombala okungu-105% kugamut ye-NTSC.
Ngaphezu kwalokho, ine- Isilinganiso sokuvuselela esingu-90 Hz. Ngenxa yaleli zinga eliphezulu lokuvuselela, yomibili imidlalo enezinhlelo zokusebenza kanye nokuphequlula iwebhu kuzobonisa ukuzulazula okuwuketshezi uma siwasebenzisa.
Isikrini esingaphambili sale divayisi Akuyona yodwa ehlanganisa, njengoba, ngemuva, sizophinde sithole isikrini esingu-1,05-intshi ngemuva, kwesokudla nje semojuli yekhamera.
Lesi sikrini esincane singalungiswa ngemiklamo ehlukene yewashi ukuze sibonise isikhathi, ibhethri ... kanye nokukwazi ukusisebenzisa ukuvala ucingo noma ukuthatha izingcingo, buka izaziso nezikhumbuzi… Uma uvamise ukuba nefoni isikrini sibheke phansi etafuleni lakho, lolu hlobo lwesikrini lulungele wena.
3 amakhamera nganoma yisiphi isimo
Njengoba ngishilo ngenhla, ngemuva kwe-Doogee V20, sithola a imojula yezithombe equkethe amakhamera ama-3, amakhamera esingamboza ngawo cishe noma yisiphi isidingo esingase sibe naso ngaso sonke isikhathi, kungakhathaliseki ukuthi singaphandle, endlini, ebusuku ...
Inzwa eyinhloko ye-64 MP ngobuhlakani bokwenziwa. Ine-aperture engu-f / 1,8 kanye ne-optical zoom ye-X.
Ikhamera ye- 20 MP umbono ebusuku esivumela ukuthi sithathe izithombe namavidiyo ebumnyameni (isebenza ngokufanayo nanoma iyiphi ikhamera yokuvikela).
I-MP eyi-8 MP ebanzi esinikeza i-engeli yokubuka yama-degree angu-130, elungele izithombe zezikhumbuzo, amaqembu abantu, ingaphakathi ...
La ikhamera yangaphambili ye-Doogee V20 Inokulungiswa kwe-16 MP.
Imelana nazo zonke izinhlobo zokushaqeka
Uma ufuna i-smartphone eqinile imelana nazo zonke izinhlobo zezindawo nokushaqeka ngaphandle kokuyeka ubuchwepheshe besimanje kakhulu, i-Doogee V20 i-smartphone oyifunayo.
I-Doogee V20 ayinayo kuphela izitifiketi ezijwayelekile IP68 kanye ne-IP69K, kodwa futhi kufaka nesitifiketi sebanga lezempi, I-MIL-STD-810.
Lesi sitifiketi ngeke nje sivimbele noma yiluphi uthuli noma amanzi ukuthi lungene kudivayisi yethu, kodwa futhi ivikela idivayisi ngaphambi kokushintsha kwezinga lokushisa kungazelelwe.
2 ibhethri lezinsuku
Ibhethri esilithola ngaphakathi kwe-Doogee V20 ifinyelela ku- 6.000 mah, umthamo osivumela ukuthi sijabulele le divayisi ngokuqhubekayo izinsuku ezi-2 noma ezi-3.
Ngaphezu kwalokho, iyahambisana ne- 33W ukushaja okusheshayo ngembobo ye-USB-C. Iphinde isekele ukushaja okungenantambo okungu-15W.
Imibala, ukutholakala kanye nentengo ye-Doogee V20
I-Doogee V20 izongena emakethe ngoFebhuwari 21 futhi izokwenza lokho ngemibala emi-3: knight black, iwayini elibomvu y I-Phantom gray kanye nezinhlobo ezi-2 zokuqedwa: i-carbon fibre kanye nesiphetho se-matte.
para bungaza ukwethulwa kwemakethe kwe-Doogee V20, umenzi unikeza ukudayiswa amayunithi okuqala ayi-1.000 ngesaphulelo sika-$100 ngentengo yayo evamile, okuyinani layo lokugcina lama-dollar angu-299.
El intengo evamile yalesi siphetho, uma iphromoshini isiphelile iba ngamadola angama-399.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Doogee V20: intengo nosuku lokukhishwa